​निःसहाय बाल आश्रमको सहयोगार्थ पुराण सुरु
न्यूजलय सोमबार २९, माघ २०७४
इटहरी । निःसहाय बाल आश्रमको सहयोगार्थ इटहरीमा पुराण सुरु भएको छ । इटहरी स्थित निःसहाय बाल आश्रमले पुराण लाएको हो ।
आश्रमका अधुरा निर्माण कार्यहरु पुरा गर्न, आश्रमका भौतिक अवस्था सुधार गर्न र इटहरी ४ स्थित कर्ण श्रेष्ठले आश्रमलाई दिएको चार कठ्ठा जग्गामा नयाँ....
​अख्तियारको कर्मचारी सम्मानित
इटहरी । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २७ औँ स्थापना अवसरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरीका नायब सुब्बा बालकृष्ण तिम्सिना सम्मानित भएका छन् ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रदेश नं. १ का प्रमुख सचिव यादब प्रसाद कोइरालाले तिम्सिनालाई ५ हजार नगदसहित सम्मान पत्र प्रधान गरि सम्मान....
मापसे गरेर चलाएको गाडी सडकमा उत्तानो पर्‍यो
धरान । धरानको छाता चोकस्थित सडकको फुटपाथमा मादक पदार्थ सेवन गरी चलाएको कार आइतवार राति दुर्घटनाग्रस्त हुँदा दुई जना घाईते भएका छन् ।
धरानकै बगरकोटमा मादक पदार्थ सेवन गरेर फर्किने क्रम बा १५च ७४८५ नम्बरको कार बिहान १ बजे दुर्घटनामा परेको प्रहरीले....
​​विद्यार्थीद्वारा क्याम्पसमा आगजनी
लहान । सिरहाको मिर्चैया नगरपालिका–५ स्थित ब्रह्मचारी दामोदरानन्द कलेजका विद्यार्थीहरुले क्याम्पसमा आगजनी गरेका छन् । निहरुले प्रशासनले आफूहरुको माग सम्बोधन नगरेको भन्दै आगजनी गरेको जनाएका छन्। माघ २४ गतेदेखि कलेजको कार्यालयमा तालाबन्दी गरी आन्दोलन गरिरहेका विद्यार्थीहरूले आइतबार अपराह्न कक्षा कोठाबाट डेस्क–बेञ्च लगायत फर्निचर बाहिर निकालेर....
​नक्कली नोटसहित दुई जना पक्राउ
इटहरी । सिरहाबाट नक्कली नोटसहित दुईजना पक्राउ परेका छन् । नेपाली र भारतीय नक्कली नोटसहित सिरहाको नरहा गाउँपालिका–१ स्थित नयाँ चोहर्वा चौकबाट पक्राउ परेका हुन् । पक्राउ पर्नेहरुमा नरहा गाउँपालिका–२ निवासी ३२ वर्षीय रोशनकुमार यादव र धनुषाको शहीदनगर नगरपालिका–२ निवासी १६ वर्षीय महेशकुमार यादव रहेका छन्....
​“रेड बुक”मा उल्लेख भएको पुल धरान लान खोजेको स्थानियको अरोप
इटहरी । रामधुनी नगरपालिका ७ स्थित पुल निर्माणकालागी “रेड बुक”मा उल्लेख भएको योजना अन्तै लैजना खोजेको स्थानियले आरोप लगाएका छन् । सुनसरी मोरंग पुल निर्माण आयोजना शाखाबाट सेउती खोला स्थित बक्लौरीको तेतरीया टोलमा पुल निर्माणकालागी आएको योजनामा धरान श्यामचौकमा लैजान लागेको स्थानियले आरोप लगाएका हुन् ।....
इटहरी बालिका बलात्कार काण्ड : मुख्य आरोपी पक्राउ
न्यूजलय आइतबार २८, माघ २०७४
इटहरी । पुस १६ गते इटहरीमा भएको बलात्कार घटनाका मुख्य आरोपी पक्राउ परेका छन् ।
आरोपी मनिष श्रेष्ठलाई नेपाल भारत सीमावर्ती क्षेत्रबाट शनिबार पक्राउ गरिएको घटनामा अनुसन्धान गरिरहेका प्रदेश नम्बर १ संघीय प्रहरी कार्यालय धरानका एसएसपी हरिबहादुर पालले बताए ।
झापामा आफन्तकहाँ लुकेर....
​मोरङको पथरीमा श्रीमानद्धारा श्रीमतीको हत्या
विराटनगर । मोरङको पथरीमा श्रीमानले खुकुरी प्रहार गरी श्रीमतीको हत्या गरेका छन् ।
पथरी–शनिश्चरे नगरपालिका ९ श्याम चौकका ३४ वर्षीय चन्द्र बहादुर लिम्बुले ३० वर्षीया पत्नी तुलसा लिम्बुलाई शनिबार साँझ खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेको ईलाका प्रहरी कार्यालय पथरीले जनाएको छ ।
​इटहरी बजारमा खानेपानीको हाहाकार
इटहरी । इटहरी बजारमा खानेपानीको हाहाकार भएको छ । टेंग्रा खोलामा फुट ब्रिज बनाउने क्रममा पाइप काटिएपछि खानेपानीको हाहाकार भएको हो ।
टेंग्रा खोलाको उत्तरतर्फको फुटब्रिज बनाउने क्रममा पुलसँगै लगिएको खानेपानीको पाइप काटिएको थियो । जसको कारण इटहरीको वडा नं. ४, ६ लगायतका बजार....
​घरमा आगलागी हुँदा तीन बालिका जलेर मरे
रसुवा । आगोले जलेर तीन बालिकाको ज्यान गएको छ । रसुवाको नौकुण्ड गाउँपालिका–५ सिस्नेरीमा घरमा सल्केको आगोमा ती बालिका जलेका हुन् ।
६ वर्षकी अस्मिता मोक्तान, ७ वर्षकी रिफोला मोक्तान र ३ वर्षकी मंगलीमाया मोक्तानको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रसुवाले जनाएको छ ।